Global Aawaj | ‘बुटवललाई राम्रोसँग बुझेकी छु, उमेरले सानै भएपनि जिम्मेवारी निभाउन सक्छु’ ‘बुटवललाई राम्रोसँग बुझेकी छु, उमेरले सानै भएपनि जिम्मेवारी निभाउन सक्छु’
‘बुटवललाई राम्रोसँग बुझेकी छु, उमेरले सानै भएपनि जिम्मेवारी निभाउन सक्छु’
२७ बैशाख २०७९ 8:38 pm
भगवती पाण्डे उमेरले अहिले २५ वर्षकी भइन् । पाण्डेले बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहकको निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएर चुनावी मैदानमा होमिएकी छिन् । ‘मैले कुनै भष्ट्राचार गर्ने छैन ।’ भनेर दुर्गा मातालाई साक्षी राखेर राप्रपाबाट बुटवलको उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेकी हुन् ।
पाण्डे १५ वर्षको उमेरदेखि नै राप्रपाको राजनीतिमा लागेकी थिइन् । युवाहरुले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि आफूले बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएको बताउने पाण्डेले बुटवलाई सुन्दर र हराबर शहर बनाउने आफ्नो परिकल्पना रहेको बताउने गरेकी छिन् । यसै सन्दर्भमा रहेका प्रस्तुत छ , निर्वाचन केन्द्रित रहेर ग्लोबल आवाजका लागि वसन्त आचार्यले भगवती पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :
तपाई उमेरले सानै हुनुहुन्छ । बुटवल उपमहानगरको उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिने सोँच कसरी आयो ?
–म सानै उमेरबाट सबै कुरामा जिग्यास राख्ने गथ्र्ये । समाजमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा म विशेष जानकारी राख्र्थे । मेरो हजुर बुबा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा म कसरी आएँ भन्ने सवालमा मेरो माइजु लक्ष्मी कुँवर अञ्चालान्याधिश हुनु हुन्थ्यो । उहाँले देश धेरै नै बिग्रियो यो देश तपाईहरु जस्ता युवाहरुको हातमा छ भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । उहाँको प्रेरणाका कारणले नै म १५ वर्षको उमेरदेखि राप्रपामा आवद्ध भएकी थिएँ । त्यसदेखि अहिलेसम्म राप्रपामै क्रियाशिल रहेकी छुँ । देशको अवस्था विभिन्न कारणले गर्दा यो पटक मैले बुटवलको उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दिनु पर्छ भन्ने लाग्यो र मैले उम्मेद्वारी दिएकी हुँ ।
तपाइँको प्राथमिकता तथा एजेण्डाहरु के कस्ता छन् ?
– मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकी छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका विरामीहरुको घरमै गएर उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार गर्नेदेखि लिएर सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजारका दरले तीन महिनासम्म सुत्केरी भत्ता दिने कुरा मैले प्राथमिकतामा राखेकी छु । बुटवल जस्तो स्थानमा अहिले सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था रहेको छैन । बुटवलका केही स्थानमा रहेका सार्वजनिक शैचालय अहिले ताला लगाएका छन् । यसकारणले बाटोमा हिड्दा शैचालय जानु पर्ने भए यात्रुहरुलाई धेरै दुःख रहेको छ । यसकारणले नगरका मुख्य मुख्य चोक र स्थानमा सार्वजनिक शैचालय र खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने मेरो उद्देश्य रहेको छ ।
सडकका कारण बुटवल उपमहानगरपालिका एउटा दुर्गम क्षेत्र जस्तो भएको छ । यसले गर्दा बुटवलको मुख्य सडकदेखि लिएर सबै सडकलाई व्यस्थित गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । मेरो कार्यकाल भित्रमा बुटवलका सबै सडकलाई मर्मत र व्यवस्थित गराउने छु । बुटवलमा रहेको धागो कारखाना लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसलाई नगरको मातहतमा ल्याई सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने छु । साथै नगरलाई भष्ट्राचार मुक्त नगर बनाउने र स्र्माट सिटि बनाउने मेरो लक्ष्य रहेको छ । विभिन्न तालिमका माध्यमबाट युवाहरुलाई सक्षम बनाएर नगरमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने छु । समग्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकासका लागि सबै काम गरेर बुटवलाई सुन्दर र हराबर शहर बनाउने छु ।
तपाइँको जीतको आधार के कस्ता छन्?
–मैले जित्छु भन्ने पहिलो आधार त मेरो राप्रपाको केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म हाम्रो एजेण्डा बलियो छ । हाम्रो एजेण्डा परिपक्क तरिकाले पुरा गछौँ। राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देङले वडाबाट जित्दै राष्ट्रिय अध्यक्षसम्म आउनु भएको हो । उहाँले वडा जिते पछि धेरै काम गर्नु भएको थियो । यसकारण मैले पनि बुटवल उपमहानगरपालिकामा काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास रहेको छ । अर्को कुरा म एउटा युवा पनि हो । म यहि ठाउँमा जन्मिए हुर्केको पनि हुँ । बुटवलका सबै गतिविधिहरु मैले सानैबाट नियाल्दै आएकी छु । यसले गर्दा बुटवलका सबै समस्याहरु मैले बुझेकी छु । म शिक्षित युवा भएकाले विदेशीनस हुन स्वेदेशमै केही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ । सबै युवाहरुले मलाई सहयोग गर्नु हुने छ । मैले कुनै भष्ट्राचार गर्ने छैन् भनेर दुर्गा मातालाई साक्षि राखेर बुटवलको उपप्रमुखमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेकी हुँ । यसकारणले पनि सबै बुटवलबासीले मलाई विश्वास गर्नु हुने छ भन्ने नै मेरो मुख्य जितको आधार हो ।
आजबाट मौन अवधि पनि सुरु हुँदै छ । जनताको घर दैलोमा जाँदा उहाँहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
–एउटा युवा त्यसमा पनि महिला जुन आँट र हिम्मत गरेर अघि आउनु भएको छ । हामी यसमा धेरै खुसि छौँ । तपाईलाई हामी साथ दिन्छौँ भन्नु भएको छ । राप्रपाको एजेण्डा हामीहरुले पहिलादेखि नै मन पराइरहेका थियौँ । अहिले बुटवलबाट राप्रपाले राम्रो उम्मेद्वार छनौट गरेको रहिछ । तपाई आउनु भएको छ । यस पटक तपाईलाई नै हामी मत दिन्छौँ भन्नु भएको छ । तपाईले अवश्य जित्नु हुन्छ हामी सबै तपाईको साथमा रहेका छौँ भन्नु भएको छ । सबै युवाहरुले पनि हामी सबै तपाईको साथमा छौँ हामीले जिताउँछौ प्रतिबद्धता पनि गर्नु भएको छ । म जस्को अघि भोट माग्न जान्छु । सबैले भोट हलोमा भन्नु भएको छ । हामी अरु पार्टीबाट बाक्क दिक्क भइसक्यौँ । दुई तिहाईको सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिका आफ्नै हातमा हुँदा पनि उहाँहरुले केही गर्न सक्नु भएको छैन् । यसकारण यस पटक तपाईलाई सहयोग गछौँ भन्नु भएको छ ।
तपाई बुटवलको उपप्रमुखमा निर्वाचित भए बुटवलमा के कस्ता परिर्वतन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु भएको छ?
– म बुटवलको उपप्रमुखमा निर्वाचित भए । सबै भन्दा पहिला बुुटवलका सडक निर्माण गर्छु । व्यापरिक केन्द्र जस्तो ठाउँमा सडकको अवस्था निकै नाजुक छ । यसकारण संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर तत्काल सडक निर्माण गर्छु । ५ वर्ष भित्रमा कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छु । बुटवल नगरमा भएका सबै समस्याको समाधान गरेर ५ वर्ष भित्रमा सुन्दर बुटवल र हराबरा बुटवल बनाउँने छु ।
निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा बुटवलवासीलाई तपाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
–म यहि नगरमा हुर्केकी हुँ । अहिले यहि बुटवलमै हुर्केकी छोरीलाई मौका दिनुहोस् । म अहिले युवाहरुले पनि केही गर्न सक्छन् भन्नेर देखाउनका लागि म अघि आएकी छु । यसकारणले गर्दा सबैले मलाई सहयोग गर्नु हुने छ भन्ने विश्वास रहेको छ । मैले कुनै पनि काम निकै पारर्दशी रुपमा गर्ने छु । एक रुपिँया पनि भष्ट्राचार गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। म जुन आँट र साहासका साथ अघि आएकी छु । पक्कै पनि तपाईहरुले मलाई आफ्नै छोरी सम्झेर सहयोग गर्नु हुने छ र यस पटक मलाई मतदान गर्न आग्रह गर्छु ।